Kontantlöshetens "n'oge ochie" na mbụ n'akụkọ ihe mere eme | Apg29
Kontantlöshetens "n'oge ochie" na mbụ n'akụkọ ihe mere eme
Site n'akwụkwọ bụ cashless izu ọjọọ. Na oge a na uche, echiche bilie n'ihu ọha cashless ịzụrụ na 1949.
Ogologo oge tupu kpọmkwem ego eji ihe ndị ọzọ na ego. Shell mee dị ka ego na Polynesia. Ihe atụ ndị ọzọ nke "ego" bu nkume, feathers, azu nko na ọbụna anụ ụlọ.
Ọbụna Ijipt oge ochie na Alaeze Ukwu Rom na-eji cashless ịkwụ ụgwọ ihe atụ, na spannmålsköp. The ụlọ ọrụ Western Union e hiwere na na US obodo nke Rochester ke New York State. Ọ nwere ya mgbọrọgwụ azụ 1851 mgbe ọ na a na-akpọ Mississippi Printing Telegraph Company. Western Union na isi-arụ ọrụ na zitere ego na telegram n'ụwa nile. A ụdị n'oge n'aka kaadị ndị ugbua na 1890 na narị afọ na Europe. 1914 malitere na Western Union na cashless ịzụrụ na a kaadị na ike-eji na amụọ ha kwetara.
The n'ezie n'aka kaadị malitere na narị afọ nke 20, ndị United States nyere site dị otú ahụ mmanụ na ụlọ ọrụ na hotel ígwè. Otu ihe na-eme ka na-eto eto jiri ihe ndị a tọrọ kaadị mụbara Motoring mgbe mmanụ ụlọ ọrụ malitere inye kaadị. Ngalaba na-echekwa malitere n'oge a afọ iri na-ebipụta a ụdị nke njirimara tokens ka ahịa ndị ahịa na kaadị. Ọ bụ ezie na ngalaba ụlọ ahịa NK eji na ọtụtụ afọ tupu n'ezie n'aka kaadị ọla tokens. Sweden mbụ "kaadị" bụ ndị na-akpọ NK-kaadị mere bụ n'ezie a agukọta mässingspollett. Na 60s nyere NK onwe n'aka kaadị na oge a na uche nke US nlereanya.
Ụfọdụ ụlọ ọrụ malitere na nwata kaadị na-enye otuto na debit kaadị ha kacha mma ahịa. Ndị a bụ ndị cumbersome iji kpam kegide ụlọ ọrụ na ajụjụ. Ụlọ ahịa na ndị ọzọ ulo oru ahụ nwere ha onwe ha kaadị. Around 1938 malitere ịnabata ọ bụla ọzọ si kaadị. Kaadị e mere na 30s nke mpempe akwụkwọ iji belata ihe ize ndụ nke counterfeiting. John Biggins nke Flatbush National Bank of Brooklyn mepụtakwara mbụ kaadị nyere site ụlọ akụ dị na 1946. The omume, na-akpọ ChargeIT Jikọtara ịzụrụ n'etiti akụ ahịa na ahịa n'ógbè.
Olee otú ọ na niile n'ezie malitere - Diners Club
Na oge a na uche, echiche bilie n'ihu ọha cashless ịzụrụ na 1949. A nwoke aha ya bụ Frank McNamara rie na ụlọ oriri na ọṅụṅụ Isi nke ụlọ Grịl-esote na Alaeze Ukwu State Building na nke ya n'aka ịlụ Hamilton Ebe E Si Nweta Corporation nwere n'ọfịs ya. Ya na ya bụ enyi ya Alfred Bloomingdale na ọkàiwu Ralph Schneider. Ha tụlere nsogbu nke a ahịa onye gbazinyere ha dị iche iche kaadị akwụmụgwọ ka ndị agbata obi na mgbe ọtụtụ n'ime ha nwere ike ghara ịkwụ ụgwọ azụ ike na ndị ahịa na-akwụ ya ụgwọ ka McNamara ụlọ ọrụ.
McNamara chọpụtakwara na ọ bụghị ya na ya wallet iji kwụọ ụgwọ maka nri. Site na-ede ya mbinye aka na a kaadị azụmahịa o nyere restaurant nwere ike ịbụ a na ụgwọ e mesịrị gafere. Dị ka general uche interacted ihe abụọ a na McNamara nwere echiche maka ihe ga-ahụ n'ezie kaadị. Na 1950, ọ tọrọ ntọala ụlọ ọrụ Diners Club tinyere ọkàiwu ya Schneider.
The ụlọ ọrụ ghọrọ onye intermediary n'etiti ndị ahịa na ụlọ ọrụ ha zụtara si. On mbụ kaadị e dere ugwo ụlọ ọrụ 'aha na kaadị. Kaadị na-eji ihe ka ukwuu oku igba maka ugwo nke nri. Diners Club kaadị ndị ibido ana kaadị nke pụtara na ha na-akwụ ụgwọ ihe niile ji kwa ọnwa.
Bloomingdale bụ maka oge a na onye òtù ọlụlụ na ụlọ ọrụ. Ma ọ bụghị ya, ọ bụ ndị kasị ama na onye nketa na ngalaba ụlọ ahịa Bloomingdale na ya ebubo na förhållade na foto nlereanya Vicki Morgan. Onye ọzọ dị mkpa na Diners Club akụkọ ihe mere eme Matty Simmons. Simmons bụ n'oge a oge nke osote onyeisi oche nke Diners Club ma bụ kasị ama dị ka a telivishọn na film na-emeputa.
The American cashless Snowball bụ ugbu a Rolling na wee too na ibu ọ bụla n'afọ. Otu nzọụkwụ bụ mgbe mbụ akụ nyere debit kaadị malitere agbala na 1951 site na Franklin National Bank of Long Island. N'oge na-adịghị, Diners Club mpi na ndị ọzọ ndị a na ụlọ ọrụ ndị na-eto na nnukwu kaadị Refeyim.
American Express e hiwere na 1850 na Buffalo imezu awara awara mail ọrụ. Mgbe e mesịrị gbasaa na ego transports na-eme na njem ụlọ ọrụ. Henry Wells tọrọ ntọala American Express na William Fargo na John Butterfield. Atọ na-ebu na-merged n'ime otu. Ke mbubreyo 50th na narị afọ, malitere kaadị arụmọrụ ke mpi Diners Club. The ụlọ ọrụ nwekwara ya tentacles na telivishọn ụwa. American Express nwere ya n'isi ụlọ ọrụ dị iche iche na ụlọ ke New York.
A oge maka American Express e tọrọ ntọala na-now Wells Fargo nke ndị mmadụ na otu aha. Wells Fargo e mesịrị aha ya bụ otu n'ime ndị kasị ibu n'ụwa obot. American Express na Wells Fargo akụkọ ihe mere eme na otú nwere njikọ chiri anya na ọ bụ ike ịmata ihe dị iche. Dị ka American Express ulo oru ya mbụ kaadị na 1958 ka ẹkenam nwekwara akaụntụ n'aka. Ọ bụ ọkacha mma ọchụ ntá ego, bụ ndị a na-eji American Express kaadị. American Express nso nso a na-arụ ọrụ bụ isi retail yinye Walmart site nke onye na-enye ndị na-akwugo ugwo kaadị Bluebird emere Kaadị.
American Express weere onwe ya na-adị otú ahụ nanị na na okwu nke ndị kasị oké ọnụ kaadị na-eme adịghị kpọmkwem ahịa. Ndị ahịa na-ewere ihe na-òtù nke nanị club.
The mbanye ọzọ bụ reminiscent nke a Masonic ebi karịa a azụmahịa. The ụlọ ọrụ na-ahazi ndị oddest ịzụrụ na ọrụ maka ndị ahịa. The imewe bụ dịtụ reminiscent nke apụta-Royce ọgwụgwọ nke ndị ahịa ha. Ma kaadị dara oké ọnụ anya ka a ghara tụnyere a okomoko ụgbọ ala. Kama ha bụ "ihe ochie rere ure Trolley na nsị." Ọ na-eme site n'oge ruo n'oge n'akwụkwọ. The asị nke na kaadị na-akawanye edemede bụ onye ụbụrụ ka ịgbanwee si ómárí ka àmụmà na-ezighị ezi mmetụta uche.
The ọzọ nanị nsụgharị nke American Express kaadị mere na "celebrity kaadị" e ji mee ihe site na ihe niile si naa ka Zlatan. Ụfọdụ rappers ọbụna dere lyrics maka ya ọ hụrụ n'anya kaadị. Akwụkwọ a eleghị anya mbụ nyere echiche nke ịbụ nanị a bụ eziokwu. Ọ na-na nkpọchi arụmụka megide n'aka kaadị na ndị ọzọ na cashless. Ma akwụkwọ bụ nwekwara a "hatbok" kwupụta cashless na n'ezie (okwu nke Zlatan) dere a football crazy dere.
Ma ịkpọasị a na-akwado eziokwu. Dyngkärran n'elu, Otú ọ dị, isịneke mere site a n'amaghi synapsfyrverkeri. Dị nnọọ ka na-agha megide ndị dị otú ahụ dị ka nwa-akpali agụụ mmekọahụ na ịkpa ókè agbụrụ na-adị mfe na-aghọ onye n'ihi na nke mmetụta nke iwe na ịkpọasị ka nwekwara nsogbu gburugburu akwụkwọ na-achị ghọọ onye na-ede akwụkwọ. E nwere onwe oge niile.
Mgbe ụfọdụ ịmafe akwụkwọ ọzọ ihe onwe onye na mkparịta ụka asụsụ na ọdịnaya, na mgbe ahụ laghachi "iwu akwụkwọ nkà ihe ọmụma echiche". Ka m ugbu a na ha ụda maka onye akụkụ ụfọdụ nke akwụkwọ. Ọ bụrụ na Zlatan n'ịgụ akwụkwọ a, M anya na ọ na-edu site atụ dị ka ibu Dude ọ bụ na ego n'anya Bibie nke ya "okomoko" American Express kaadị. Ime ihe ọ na-eme ihe kasị mma. Teepu kaadị nke a football. Igba mgbe na obi ụtọ dị anya si n'ọhịa ebe ọ dịghị onye pụrụ ịchọta ya. Ebe ike ya niile adị otú anụ ọhịa n'ụzọ kwesịrị ekwesị ka urinate na kaadị. Olee otú na-ede akwụkwọ a iwe obi? Agụ akwụkwọ ma chọpụta ihe mere.
MasterCard na Visa - okwu mmeghe
MasterCard (tọrọ ntọala 1966) bụ kama a ekwenye nzukọ ọtụtụ puku mmiri na ndị òtù karịa a kpere
Companies na nkịtị uche. E nwere ole na ụlọ ọrụ na-akanyam kaadị ikikere. MasterCard n'oge akụkọ ihe mere eme na-jikọrọ abụọ ichekwa ego na bank òtù maka n'aka kaadị. Interbank na WSBA. Ọ kere a oru ngo maka kaadị a na-akpọ nna ukwu n'Aka. Master n'Aka e mesịrị renamed MasterCard. Mmalite nke ọ ghọọ a zuru ụwa ọnụ kaadị ụlọ ọrụ bụ a mmekota n'etiti ukwu n'Aka na Mexico akụ Banco Nacional. A zuru ezu nke akụkọ bụ iwu ogu na bilie site Worthern Bank na-adịghị ekwe ka iso Master n'Aka. MasterCard ibuot itieutom bụ ugbu a n'obodo Ịzụ na New York State.
The show yiri MasterCard a ekwenye nzukọ. The ụlọ ọrụ na-ekesịpde site na a Business Association esịnede tumadi nke bịara n'ikperé mmiri. E nwere ike njikọ na Bank of America e mbụ akụ malitere esite Visa ụzọ BankAmericard 1958. First kaadị nwere ike BankAmericard eji naanị na California. Ọ machibidoro iwu na-eduzi ụlọ akụ gafee ala ala. Nke a skirted ya site ikikere kaadị ọzọ obot. Ọtụtụ kaadị akwụmụgwọ
akpa si Bank of America na-na-abụghị depụtara ụlọ ọrụ na so-ekesịpde National BankAmericard.
A oge tupu show natara ya ugbu a aha dị ka ha nyere ha ihe ha mbụ kaadị akpọ Entrée. Ọ bụ a debit kaadị na e jikọrọ ka mgbe ọhụrụ abụrụ kọmputa usoro maka Nyocha akpọ isi m na isi II. Kwekọrọ ekwekọ systems Master n'Aka akpọ INAS na INET.
The akụkụ nke View na na-abụghị United States na-na-ere 1974 na ghọrọ a enyemaka nke a otu nke bịara n'ikperé mmiri na-akpọ IBANCO. The ụlọ ọrụ aha ya bụ na National BankAmericard emecha na Visa USA. IBANCO renamed akpatre banyere na Visa International. The mbụ nzipu ozi nke ụlọ ọrụ kaadị n'obodo nke Fresno, na ụzọ nke Joseph Williams. Mgbe ahụ, wee mailings na obodo ndị ọzọ na California. Oru ngo-a mebiri mgbe niile ma na-akatọ na igwu wayo. 1970 gbanwere niile aha na show. Ụwa ọnụ nke n'aka kaadị malitere n'oge na US mmiri hapụrụ ha kaadị usoro na sonyeere ma Master n'Aka ma ọ bụ BankAmericard onye ahụ mesịrị ghọọ MasterCard na Visa.
View natara na 1987 a iwu na-elekọta dum retail network Interlink maka akụ kaadị (kasị netwọk nke ụdị na United States). Na '90s ulo oru Smart Card Visa Cash na ike-kwajuru na ego site ATMs. View kewapụrụ mmepe si magnetik straipu na mgbawa na kaadị gụnyere ihe na-akpọ Mmemme Onye Mmekọ. Na Manhattan, anoghi n'ulo oba Citibank na Chase Manhattan na mbubreyo 90s a ule kaadị ahụ kpamkpam kụrụ afọ n'ala. Ọtụtụ mgbe, ndị mmadụ boro ya ebubo na kaadị nanị otu ugboro. A mmekorita ya na Internet search ụlọ ọrụ Yahoo malitere ike a zuo page na Internet. Lee meghekwaara nnọọ utkonkurerat imekọ ihe ọnụ na Microsoft na ndị mmadụ nwere ike ime ha ichekwa ego na bank azụmahịa na kọmputa gị. Display na-headquartered na Fresno na California.
American Express na Diners Club n'aka kaadị enye onwe ha mgbe Visa na MasterCard eme adịghị. Na nke ikpeazụ ahụ, ọ bụ n'ụzọ bụ isi so na anoghi n'ulo oba na inye kaadị. Otu ihe dị mkpa dị iche n'etiti kaadị ụlọ ọrụ bụ na ụfọdụ na otú na-ekwu na-eme n'ụlọ akụ, ebe ndị ọzọ na-adịghị. Visa na MasterCard kaadị data nkwurịta okwu na netwọk dị iche nyochawa nnọọ iche. MasterCard usoro, a na-akpọ Banknet, Visa si VisaNet.
Visa na MasterCard na-si otú na-achịkwa ndị so mmiri ka kaadị ọrụ ndị N'eziokwu kpamkpam na-aka nke ndị a obot. The mpi n'etiti Visa na MasterCard bụ ihe fọrọ na-adịghị adị n'ihi na ọtụtụ anoghi n'ulo oba na-òtù nke otu nzukọ bụkwa ndị otu nke ọzọ.
Discover Financial Services ma ọ bụ dị nnọọ obere Discover bụ ihe ọzọ na isi US kaadị ụlọ ọrụ. Ọ e tọrọ ntọala na 1985 site na nkewa nke ego ụlọ ọrụ Dean Witter na ghọrọ akụkụ nke Sears.
Discover ghọrọ otu nọọrọ onwe ha ụlọ ọrụ na 2007. Ọ na-enye kaadị Discover Kaadị. The technical kaadị netwọk akpọ Discover Network na usu. Headquartered na suburban Chicago. 2008 zụtara Discover na Diners Club nke ego otu Citigroup.
Sears, mmoro & Co. e hiwere na 1886 site Richard Sears na Alvah C. mmoro. Sears ghọrọ karịrị oge gụnyere ndị kasị ibu US mail-iji ụlọ ọrụ. Sears na-ejikọta ya na skyscraper Sears Tower na Chicago ugbu a na-akpọ Willis Tower. The skyscraper nke maka a oge bụ ụwa tallest ụlọ ahụ ekesịpde ruo 2004 site Sears.
The ego pụrụ iduga ha si azụ 1200s. Ma eji n'ezie anya naanị mgbe ndenye ego malitere na-eji ọlaedo akpụ na England. Akwụkwọ ndọrọ ego ndidi kemgbe ụwa, na mgbe ụfọdụ a na-eji dị ka ego. Otu ihe atụ nke a bụ mgbe ndị agha na 50s na Hong Kong-eji ndenye ego ka a ego ugwo. Ọ bụla ozu ahia aka nlele na Chinese na onye ọ bụla zuo. Ọ pụrụ ime ka a agha ọtụtụ ọnwa gasịrị hụrụ a ego nke ọ na onwe ya na-onwunwe-ya.
Ebe E Si Nweta kaadị na ego na-arụ ọrụ ụlọ akụ okwu n'ụzọ yiri nke ahụ. The akaụntụ njide ede a ego maka ego nke nke nnata nwere ike ahụ gbapụta na a akụ. Ịlele akaụntụ nwere ike otoro (tụnyere n'aka kaadị). Onye kọwara akụziri nlele dị ka a "eju si version of akụ kaadị". Na kontantlöshetens nwata-ekwu ihe dị ukwuu banyere ego idozi otu banyere cashless.
A nwoke ugbua na 60 na narị afọ vurmade maka a na ego na cashless ọha mmadụ ebe John Diebold. Ya na-agba izu ụlọ ọrụ Diebold Group kere ọtụtụ kọmputa dabeere na netwọk nke bịara n'ikperé mmiri na a afọ iri. Diebold echiche mmetụta George Mitchell onye nwere a agadi itie ke Federal Reserve (US akụ etiti). Nke ikpeazụ odomo ndị na US mmiri ka ịgbanwee gaa na kọmputa usoro. Ọ na-ekwu na akwụkwọ ndọrọ ego ha dị oké ọnụ, nke yiri nnọọ taa arụmụka ego.
Ọ bụ mmadụ dị ka ndị a na-emetụta ndị na nzukọ ndị American Bankers Association (ABA) na 1976 na ichoputa na o na a ga-eme n'ọdịnihu na ego rụrụ na cashless ọha mmadụ. Ọ na-kpụrụ a kọmitii a na-akpọ Lelee Naa Society Kọmitii. Ke ufọt a bụ ABA isi nke akpaaka Dale Reistad. The United States bụ bụghị nanị "kontantlöshetens nna ya" ma na-emegiderịta, mgbe ịlele na mba nọmba otu. Akwụkwọ ndọrọ ego e nwere nakwa na e zigara ụlọ ọrụ na-eche n'elu ugwo nke mgbe ego.
Ná mmalite 90 bụ nke asaa ugwo na Sweden site ego. Na 2000s, ọnụ ọgụgụ bụ microscopic 0,1 percent. Na oge biri Swedish mmiri otú ọzọ na ndị ọzọ akwụkwọ ndenye ego. Ọ dịghị onye nke Swedish mmiri anwa anwa naanị odori maka akwụkwọ ndenye ego. Mgbe ahụ, mgbe a Swedish akụ akpatre mere ọ na-eso ndị ọzọ maka nlele na akara aka na-akara ogologo. Dị ka ọchịchọ ịmata bụ na ego wayo bụ mpụ ofụri United States ma ọ bụghị overdraw otuto na akaụntụ.
A bit nke ego na akụkọ ihe mere eme
Ogologo oge tupu kpọmkwem ego eji ihe ndị ọzọ na ego. Shell mee dị ka ego na Polynesia. Ihe atụ ndị ọzọ nke "ego" bu nkume, feathers, azu nko na ọbụna anụ ụlọ. Na enweghị mgbe mkpụrụ ego nwere oddest ugwo mgbe ụfọdụ. Ka ihe atụ, ha na-eji ígwè Ogwe dị ka ego na Sparta n'ihi na ha kewapụrụ n'èzí ụwa.
Southwest ego malitere ga-eji na akụkụ nke Asia Minor na 600 BC Near East bụ banyere ihe anyị na-now na-akpọ Middle East. Ọ bụ lydiske King Croesus onye na 500 BC malitere minting mkpụrụ ego nke ọlaọcha na ọlaedo. Ọ na-akpọ Croesus na ya na okwu ihe immensely ọgaranya. Bụ ebe e nwere a ụkọ nke oké ọnụ ahịa ọla eji n'ụzọ ọla kọpa. Nke a mere ka ihe atụ, n'oge na-Rome. N'oge Viking Age na dị ukwuu ego na Sweden si ma ụwa Islam na akụkụ nke Europe. N'ihi na Vikings bụ silver uru, ya mere, na-ekwu okwu ego. Ya mere, ọbụna gharazie ịba uru ego ọla-ọcha na iche iche silver ihe ugwo. Mgbe e mesịrị na akụkọ, e nwere nnukwu ọla kọpa efere na etinyere ego.
The mbụ Swedish mkpụrụ ego ọlaọcha ndị minted na Sigtuna gburugburu afọ 1000. Ná mmalite 1500s malitere ịgụ ego aka. Malite na ufọt ufọt 1800s malitere na Sweden iji a isi ego (okpueze wee okpueze), nke e kewara 100 cents. Mgbe otu n'ime Sweden hapụrụ gold ọkọlọtọ na 1931 okụrede ahụ n'ezie dị iche n'etiti mkpụrụ ego na akwụkwọ ego. The gold ọkọlọtọ pụtara na praktien nke banknotes nwere ike gbanwere gold si a gold idobere. Nke a na banknotes n'ozuzu dabeere a nkwa nke na obi ike na steeti. A obi n'ihi na ala dị ka ọ bụ ugbu a ekwesịghị ịdabere na. The ego incompetence bụ nnọọ ebe nile. Ma kama ọjọọ okwukwe na ego karịa a ohu na unconscionable cashless otu nke na-adịghị akpali ọ bụla obi ike mgbe niile.
Zuru ego akụkọ ihe mere eme na mmepe nwere njikọ chiri anya nkà nke obibi akwụkwọ. Ha bụ ndị mbụ a ụdị receipts ma ọ bụ ụgwọ tupu ha ghọrọ n'ezie ịkwụ ụgwọ. Banknotes tillverkads mbụ na China na banyere otu oge dị ka kpọmkwem ego malite na-abịa (600 BC). Mgbe ahụ malitere ojiji nke banknotes ka nwayọọ nwayọọ na-agbasa site na China na Europe na Middle Ages. Ọ bụ n'ezie na Sweden na otu na 1600s maka oge mbụ nyere kwesịrị ekwesị banknotes na Europe. Akpa, site Stockholms Banco, mgbe ahụ Anya? Signboards akụ na n'ikpeazụ Riksbank na njedebe nke 1800s. Tupu mgbe enwe ndị ọzọ mmiri karịa Riksbank onwe ndetu. Next na Sweden, England ka e biri ebi banknotes na.
Numismatics - a na-adọrọ mmasị na sayensị ma omume ntụrụndụ
Numismatics bụ ịmụ niile mkpụrụ ego. Ọ na-agụnye na-eji anyaukwu fiddling na na ịchọ tokens, banknotes na Ọla. Ọbụna dị ka a na obere nwa, na-ede akwụkwọ Ihe masịrị oké mkpụrụ ego catalogs na adị na ọbá akwụkwọ. Ịnakọta mkpụrụ ego na ihe ndị yiri bụghị naanị banyere ihe na-fun akpọkwa na-onwunwe-ha ka kpọrọ, ighikota na-atụgharị na n'ikpeazụ nkwụsị na obere akpa na a na mkpụrụ ego nchekwa. Ọ bụkwa a ụzọ ịmụta banyere akụkọ ihe mere eme na otú ahụ dị ka stampụ ikpokọta nwere ike ịbụ a ụzọ ịmụta banyere mba ndị ọzọ. Mgbe ụfọdụ mkpụrụ ego na-fọrọ nke nta ka nanị ezi na kọntaktị na a akụkọ ihe mere eme oge.
Mkpụrụ ego Ịnakọta bụ otu n'ime ndị omume ntụrụndụ ebe e nwere nnukwu akwụkwọ. The mbụ Swedish numismatikern bụ Elias Brenner. O dere, sị na njedebe nke 1600s ọrụ ego onye aha ke Swedish ọma ga-abụ ihe dị ka "Mkpụrụ ego dictionary nke Svea na Göters mba". Nkebi a na-na ebe a nkwanye ileta Mkpụrụ ego Cabinet na Stockholm. E nwere na-akpali mkpụrụ ego collections na ndị ọzọ Swedish obodo. Mkpụrụ ego Cabinet bụ werekwa ego na nke ihe ngosi nka na kasị numismatic collection na Sweden. Ọ ghọrọ a iche iche ihe ngosi nka na 1975 ma kwaga a di na nwunye nke iri afọ mgbe e mesịrị ka Castle Hill.
Otu nke akwụkwọ a bụ isi na ozi bụ na-egosi otú ụwa ọzọ bụ na ihe na-eru nso a ngụkọta cashless ọchịchị aka ike. The ọzọ ego akwụsị ndị ọzọ na ị hapụ ihe ndị magburu onwe numismatics mwute ikwu ya mmasị site ịcha na a mma
na njedebe nke a ụwa na-akụkọ ihe mere eme eriri n'agbanyeghị na ọ na-aga site na a nnukwu akụkụ nke akụkọ mgbe akpatre etịbede. Ugbu a ọ bụ dị mwute ikwu na oge iji kwụsị iso na-ede akwụkwọ na-amalite na-ede akwụkwọ banyere ego na ha mere eme. Akwụkwọ a bụ na-kasị banyere ichekwa oge a ego. Ma nke a bụ ihe dị oké arịrịọ. Swedish numismatists na mkpụrụ ego na-anakọta! Dịrị n'otu! Aka-alụ ọgụ iji chebe ochie na ndị ọhụrụ ego. Ibuso cashless oruru militants nke akụkọ ntolite.
V 02, söndag 17 januari 2021 kl 20:13